Iddoola saphaphuu OpenOffice.org irra, support.openoffice.org gargaarsa argachuu nidandeessa.
Goolaba tajaajilawwan gargaarsa ammeetiif, faayilii Nadubisii, ukaankaa LibreOffice keessaa daawadhu.
Fuuloota gargaarsaa afaan naannoo
Waa'ee OpenOffice.org gaafadhutii, ofiin duuloo irraa gargaarsa barbaadi, tarreewwan ergannoo matadureewwan gargaarsaa irratti marii godhu. Iddoola saphaphuu OpenOffice.org www.openoffice.org/mail_list.html irratti tarreewwan ergannoo waliigala fi addaa argachuu dandeessa.
Yeroo ati waa'ee ittisaa mosaajjii kana fayyadamuun waliin hojjettutti, dagaagsitoota tarree ergaa ummataa dev@openoffice.org tin qunnamuu dandeessa. Yoo fayyadamtoota biroo waliin dhimma babade mari'achuu feete, tarree ergaa ummataa discuss@openoffice.org fayyadamuun erguu dandeessa.
OpenOffice.org baay'ee fooyya'aadownload.openoffice.orgnaqachuu dandeessa.
Hirmaadhuu fi deebisii kenni
Ummata addunyaa waliin OpenOffice.org keessatti hirmaannaa si'ataa qabaachuu yoo barbaadde, dubdeebii kennuuf, amaloota mari'achuuf, wanta dabaltaa gaarii kennuuf, FAQ keessatti barruu mataa kee barreessuuf, akkamitti, hujeekaan, irrabahii viidiyoo uumuuf anaa dhufu jedhamta.
Daawwadhu Iddoola saphaphuu galmeessa ykn Fuula jalqabaa wiikii fi hirmaattootaaf geessitoota duukaa bu'i.
Title is: Gargaarsa Argaachuu